OBBO KAFFALOO NIGAATUUN haa gadhiifami! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOBBO KAFFALOO NIGAATUUN haa gadhiifami!
Qeerroo Horroo Guduruu irraa! Waxabajjii 1, 2018
Obboo Kaffaaloon abba isaani Obbo Nigaatuu Baddeessoo fi haadha isaanii addee Zawudee Akaaluu irraa bara 1975A.L.H.godina Matakkalitti dhalatan. Barumsa isaani sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa godinichumatti xumuruuni barumsa isaani sadarkaa olaanaa yuuniversiitii Dillaa irraa afaan Ingiliffaan bara 1998 digirii jalqabaa argatan. Sana booda, bara 1999-2000 A.L.Htti barsiisaa Afaan Ingiliffaa ta’anii Godina Horroo Guduruu Wallaggaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Finca’aatti barsiisaa turan.
Bara 2000 A.L.H irraa eegalee Dhaabbata Miti-mootummaa “World Vision” jedhamu keessa magaalota Asoosaa, Beddellee fi Amboo keessa hojjetaa turan. Barnoota isaanii Digirii lammaffaas damee Leadership tiin argataniiru. Waggaa darbe gaafa Amajjii 11, 2017 hojii isaanii idleef gara magaalaa Adaamaa deemanii achitti Humna Komaand Poostiin Butamanii Gara mana dararaa Maayikalaawwiitti darbataman. Ji’oota toorbaaf erga achittii dararamanii booda hagayya 2017 himanni shororkeessummaa irratti banamee murtee tokko malee mana hidhaa qiliinxoo keessatti hiraarfamaa jiru.
Obbo Kaffaaloon lafa hojjetan hundatti Oromummaa isaaniif Quuqama Guddaa kan qaban, Nama amantaa fi Uummata birattii jaallatamaa turanidha. Akkasumas Barattoota Sadarkaa lammaffaa finca’aa yeroo barsiisanitti barattoonni isaanii seenaa isaanii akka beekanii fi barnoota isaaniitti cimoo akka ta’an sammuu isaanii qaraa turaniiru. Akkasumas Qabsoo Uummata Oromoo Godina Horroo Guduruu Keessatti soda tokko malee Quuqama Oromoof qaban ifatti mul’isaa turaniiru.
Sabboontota Oromoo Matakkal Jiran waliin ta’uunis Gaaffilee Uumamaa fi Mirga nammummaa Mootummaan Itoophiyaa heera mootummaa irra kaa’e Mirga Afaaniin barachuu, Aadaa Ofii kabajuu fi K.K.f gaafachaa turani. Kanaaf Egaa Ayyaana Irreecha bara 2016 Uummanni Oromoo Matakkal akka kabaju kan godhe isini jedhamanii Dhalattoonnii fi Sabboontonni godinichaa 15 ol ta’an lafa jiranii qabamanii mana hidhaa keessattii dararamaa turanii gadhiifamanis Obbo Kaffaaloo Nigaatuu fi Waahilli isaanii Sabboonaa fi Dhalataa Matakkal Kan Ta’an Obbo Habtaamuu Bayyanaa wajjin mana hidhaa qiliinxoo Keessatti hafanii jiru.
Abbaan Obbo Kaffaaloo Nigaatuu Gootaa fi Sabboonaa Oromoo Matakkal kan ta’an Obbo Nigaatuu Baddeessoos Sababaa Oromummaa isaaniitiin qofa mana hidhaa keessatti utuu dararamaa jiranii Bara 1990 A.L.H mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii darbuun seenaan ni dubbata. Obbo kaffaaloon Abbaa ijoollee Dubara tokkoo fi Ilma tokkoo yommuu ta’an Obbo Habtaamuunis daa’ima dubaraa tokko qabu. Obbo Kaffaaloonis ta’e waahilli isaanii Qabsaa’aan Habtaamuu Bayyanaa badii fi yakki isaan addatti dalagan waan hin jirreef Hatattamaan Haal duree tokko malee Mana hidhaatii akka hiikaman Waamicha goona.
RSWO : Marii Hayyuu Oromoo Obbo MOOSISAA OOSAA waliin RSWO - Waxabajjii 4, 2019: Marii…
RSWO: Marii Dhimma Yeroo'rratti, Hayyuu Oromoo Obbo JAMAAL IBIRAAHIM Waliin Taasifne
RSWO | Marii Dhimma Yeroo'rratti, Hayyuu Oromoo Obbo JAMAAL IBIRAAHIM Waliin Taasifne﻿ RSWO - Eebila…
Tarkaanfii Lama Gara Boodaa